Xoghayaha cusub ee arrimaha gudaha ee dalka Britain, Priti Patel ayaa sheegtay in ay tahay in dambiilayaashu “dareemaan si dhab ah argagax” marka ay timaado inay ku fakaraan jebinta sharciga. | Hubsad News
Xoghayaha cusub ee arrimaha gudaha ee dalka Britain, Priti Patel ayaa sheegtay in ay tahay in dambiilayaashu “dareemaan si dhab ah argagax” marka ay timaado inay ku fakaraan jebinta sharciga.
August 4, 2019 - Written by weryayaasha shabakada hubsad
adalkan ayey ku xoojinaysay dhawaaqii todobaadkii hore markii uu noqday Ra’ilwasaaraha Boris Johnson uu ku sheegay in uu hawlgalin doono 20 kun oo ciidamo Booliis oo dheeraad si ay wax kaga qabtaan dambiyada ay ka mid yihiin adeegsiga mindiyaha iyo ka hortagga dambiilayaasha.
Mrs Patel oo wareysigeedii ugu horreysay siisay wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London ayaa farta ku fiiqday inay doonayso in ay Booliiska siiso awoodo hor leh, isla markaana ay rajeynayso in ciidamo dheeraad ah lagu arko wadooyinka si ay cabsi u dareemaan dambiilayaashu.
Warka xoghayaha arrimaha gudaha ayaa ku soo aadayaa todobaad uun ka dib markii la soo saaray daraasad cusub oo sheegaysa in dalka UK laga diiwan galiyey 5.9 milyan oo dambi sanadkii la soo dhaafay oo kaliya, waana tiradii ugu badneyd 15-kii sano ee la soo dhaafay.
Ra’isalwasaaraha Britain Boris Johson ayaa si cad u tilmaamay in ka hortagga dambiyada ay ka mid tahay muhiimadiisa koowaad, iyadoo xafiiskiiu ku bixin doono 1.1bilyan oo Geniga Istarliinka ah sadexda sano ee soo socota shaqaaleysiinta 20,000 oo Booliis ah, waxaana xafiiska arrimaha gudaha uu fudadeyn doonaa xannibaadda saaran barnaamijka dadka lagu joojiyo laguna baaro.
Cabdi Afrax Guure oo ka mid ah hogaamiyeyaasha ururada bulshada dalka UK gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa tilmaamay in tani tahay wixii ay muddo ku celcelinayeen ee ahaa in si dhab ah loogu soo jeesto wax ka qabashada dambiyada, gaar ahaan kuwa dhalinyarada oo ay tiro badan oo ka mid ah dhalintaas ay naftooda ku waayeen, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Soomaali.
“Hadafkeyga hadda waa adkeynta go’aankeenna sharciga iyo kala dambeynta iyo dib u soo celinta shaqada dadka ee safka hore inoogu jira ee booliska,” ayay raacisay hadalkeeda xoghayah arrimaha gudaha. Olalaha lagu qorayo 20-ka kun ee Booliiska ayaa la bilaabi doono bisha September ee foodda inagu soo haysa, sida uu sheegay xafiiska Ra’isalwasaaraha.
Goor sii horreysay oo todobaadkan ah guddiga arrimaha gudaha ee Baarlamanka UK ayaa ka shanqariyey in Iskuulada ku yaal deegaanada ay ku badan yihiin qatarta dambiyada ee dhalinyarada la geeyo ciidamo Booliis oo ay ka go’an tahay hawsha ay qabanaayaan.